Guddoomiyaha Godobo jiraan oo ka hadlay Abaar kajirta tulooyin hoosyimaada Godobjiraan (dhegayso) – Radio Daljir
Janaayo 6, 2018 11:25 b 0
Guddoomiyaha degmada goddob jiraan Axmed Saciid Cismaan oo waraysi gaar ah siinayay Radio Daljir ayaa waxaa uu ka hadlay Arrimo dhowr ah ,Abaar xooggan oo xiligaan ka jirta degmadaasi iyo deegaanada hoostaga .
Waxaa uu u sheegay in xilligaan abaar xooggan oo saamaysay dadka iyo duun-yada ay ka jirto halkaasi ,maadama 4 sanno ee la soo dhafay uusan wax roob ahi ka da’in.
Guddoomiye Axmed Saciid ayaa waxaa uu sidoo kale sheegay in dadka deegaanku ay billaabeen qorshe iskaa wax u qabso ah oo ay ku dhisayaan waddo isku xiri doonta degmada iyo deegaanada hoosyimaada ,maadama in muddo ah ay waddo xumo halkaas ka jirtay.
Shacabka Puntland,Hay’addaha caalamiga ah iyo Xukuummadda Puntland ayuu ka codsaday Guddoomiyihu inay ka gacan siiyaan dhisamaha wadada iyo caawinta deegaanka ee abaartu hayso .
Ugu dambayntii waxaa uu Madaxweynaha Puntland fariin ugu diray inay ka sugayaan balan-qaadkiisii xilliga doorashada.